आकर्षण Pitsunda र मनोरञ्जन गर्ने रिसोर्टमा
यसको स्वादिष्ट रक्सी, सुगन्धित द्वारा पूछे जाने र ग्रह मा सबै भन्दा राम्रो प्रेमीहरूको र केटाहरूलाई मानिन्छ यी मानिसहरू, को लागि जानिन्छ देश। ठाउँ एक अविस्मरणीय छुट्टी रिसोर्ट्स प्रदान गर्दछ रूपमा अब्खाजिया ज्ञात छ। यदि यहाँ सबै पछि, जहाँ अरू यस्ता अद्भुत प्राकृतिक र जमिनको अवस्था, र यस्ता अद्भुत मान्छे, भेट्न? र छलफल पर्यटकहरु सबैभन्दा लोकप्रिय शहर को एक Pitsunda (अब्खाजिया), हामी यस लेखमा विचार जो आकर्षण।
शहर को गठन
Pitsunda मात्र केही वर्ष पहिले थाले। त्यो समय सम्म त्यो शहरी-प्रकार बस्तियों स्थिति लगाउँथे। तर तपाईं पहिलो र त्यसपछि दोस्रो शीर्षक प्राप्त अघि, Pitsunda यसको गठन को ऐतिहासिक चरण को शताब्दीयौंदेखि लिए। Pitsunda आकर्षण उनको जीवन लामो-गणनामा र समकालीन रूपमा साक्षी। यो सबै VI शताब्दी ई.पू. मा सुरु भयो। त्यसपछि, यो बिन्दुमा त्यहाँ व्यापारीहरु, को युनानी वर्ण को एक विशाल शहर पोर्ट निर्माण जो को क्षेत्र मा एक प्राचीन बन्दोबस्त थियो। नाम उहाँले Pitius (Pitiunt) दिइएको थियो। अनुवाद यो शब्द अर्थ "पाइन रूख"। आफूलाई यो प्राचीन शहर Ldzaa कल Abkhazians।
Pitiunt यो ठाउँमा बाहिर उत्खनन द्वारा पुष्टि भएको थियो जुन एक उच्च सामाग्री संस्कृति, छ। Pitsunda आकर्षण पनि यस तथ्यलाई समायोजित। उदाहरणका लागि, archaeologists पानी आपूर्ति, मल, स्नान र अन्य वस्तुहरूको रहलपहल पाएका छन्। प्रथम शताब्दीमा विज्ञापनमा Pitius 256 वर्ष सम्म शहर स्वामित्व जो रोमी, द्वारा कब्जा भएको थियो। चतुर्थ शताब्दीमा बाट सुरू हुने, पोर्ट को निर्वासनमा परेका मसीहीहरू अब्खाजिया पहिलो मसीही समुदाय सिर्जना ठाउँमा भएको छ। कि पछि, शहर यो विनाश धेरै युद्ध अनुभव छ। Pitsunda तर सोभियत समयमा पुनर्निर्माण प्रत्येक समय लोकप्रियता विश्वव्यापी रिसोर्टमा प्राप्त गरेको छ।
Pitsunda घुमफिर सुरु भएको पाइन रूखहरू छ स्थानीय वर्ण, संग खडा। तिनीहरूले पाइन शहर आरक्षित को scrupulous सुरक्षा अन्तर्गत छन्। यसलाई 1926 देखि अस्तित्वमा रहनुभएको छ। सम्पत्ति क्षेत्र जो त्यहाँ 30 हजार रूखहरू छन् 200 हेक्टरमा, कवर। एक दुर्लभ प्रजाति - ती सबै पाइन Pitsunda सदस्य हुन्। यो अन्य जातिहरु देखि असामान्य लामो सुई अलग छ। को नम्बर प्लेट संग रूख प्रत्येक ट्रंक nailed। यसरी, प्रत्येक रूखले आरक्षित मा संख्यात्मक छ। केही पाइन रूखहरू धेरै पुरानो हो - तिनीहरूले 200 वा बढी वर्ष हो। पाइन रूखहरू क्षेत्रमा अधिकतम लम्बाइ मा पचास मिटर र मंडल मा 7.5 मीटर पुग्छ। र विशाल को नाम - कुलपिता।
ताल Inkit र Riza
Pitsunda स्थलहरु (तल तस्विरमा), जो - यो Centenary Pines बाहेक प्रकृति को वस्तुहरु मुख्य रूप छ, र दुई सुन्दर ताल को उपस्थिति दावा। तिनीहरूलाई को एक Inkit भनिन्छ, यसको लम्बाइ - मात्र 1 मी 200 मिटर, चौडाइ - 500 मीटर। जलाशय अधिकतम गहिराई पाँच मिटर पुग्यो। Inkite क्रिस्टल स्पष्ट नीलो जो केही घण्टा ताल पराउँछु गर्न अनुमति दिन्छ, र यो चिन्ता छैन पानी, मा। Inkit मिथक र दन्त्यकथा को एक अविश्वसनीय राशि अप ढेर बारेमा। त्यसैले तिनीहरू प्राचीन समयमा यो जहाज Aleksandra Makedonskogo को थिए जहाँ एक बंदरगाह रूपमा सेवा भन्छन्।
दोस्रो ताल रिट्ज भनिन्छ। यो काकेशस को सबैभन्दा ठूलो लिजेन्ड छ। यो समुद्र स्तर माथि एक किलोमिटर को ऊंचाई मा स्थित छ। ताल बाटो मार्फत छ को indescribable सौन्दर्य सुन्दर र अशान्त नदी Bzyb साथ, पहाड घाटी। साथै, यो चमक पारित गर्न आवश्यक छ नीलो ताल र केही शानदार झरने। यो दूरी विजयी र एक अवलोकन Ritsa मा शुद्ध पहाड हावा संग मत एक वास्तविक जोरजियन मटन बारबेक्यू आनन्द उठाउन सक्छौं।
पनि केही ठाँउहरु को
आकर्षण Pitsunda - यो पनि एउटा प्राचीन Pitiunt को रहलपहल छ (लेख द्वितीय ई.पू. सम्बन्धी ...)। आंशिक reconstructed, तिनीहरूले पर्खाल कमै मात्र छन् र भग्नावशेष एक एकदम ठूलो क्षेत्र मा अवस्थित छ। यो सबै को नाम - प्राचीन बन्दोबस्त, तर त्यहाँ कुनै पनि उत्खनन, वस्तु को एक महत्वपूर्ण भाग thorns संग overgrown छ किनभने गरिएको छैन।
र पर्यटकहरु को ध्यान बिजुली घर Pitsunda दिनुपर्छ। अर्को तट, बहु-मंजिल्ला बोर्डिङ घरहरू नजिक गर्न फलाम टावर को टावर। धरहरालाई एक धातु फ्रेम घेरिएको छ। धेरै दशकसम्म प्रकाशस्तम्भ विश्वासी सहायक जहाज थियो। उहाँले अनन्त समुद्र मा पाठ्यक्रम राख्न रात तिनीहरूलाई मदत गरे। को प्रकाशस्तम्भ "खारेज" जब उहाँले एक स्थानीय ल्यान्डमार्क, Pitsunda को प्रतीक को एक भए।
बाँकी सबै Delights
तपाईं Pitsunda, आकर्षण र मनोरञ्जन यो धेरै विविध छ प्रेम पर्नु। यसलाई आफ्नो पाहुनाहरूलाई एक अत्यन्तै रोचक कार्यक्रम दिन्छ। आखिर, यहाँ हेर्न र कसरी रमाइलो गर्न के छ। विश्राम को एक प्रकार एक टास्नु ग्लाइडर छ। मात्र चरा उडान एक उचाइ देखि, तपाईं Pitsunda, जो "को काकेशस को मोती" भनिन्छ साँचो सौन्दर्य कदर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, ताल संग Inkit आकाश ग्लाइडर मा rises। यो आकर्षक शहर भन्दा उड गर्न सिफारिस गरिएको छ। यस्तो अविस्मरणीय अनुभव अरु कतै प्राप्त हुन सक्छ।
र एक सानो रमाइलो
को ग्लाइडर गर्न साथै, रिसोर्ट एक सानो सुझाव घोडचढी। Pitsunda (मनोरञ्जन, माथि वर्णन आकर्षण) आफैलाई संग एक्लै हुन चाहने ती लागि घोडचढी प्रदान गर्दछ। मा cloven-hoofed जनावर अनुभव पर्यटकहरूले पाइन निकुन्ज भ्रमण गर्न सल्लाह छन्। यहाँ तपाईँले अद्भुत स्थानीय प्रकृति, ताजा र सफा हावा सास लिनु गर्न सक्नुहुन्छ, पराउँछु आफ्नो शरीर र प्राण आराम।
विदेशी बार्बाडोस। द्वीप Carib-मोती
नेल्सन गरेको स्तम्भ: इतिहास, वास्तुकला र रोचक तथ्य
केही सरल विकल्प: पनीर लागि खमिर
के घरेलू र विदेशी लेखकहरूले को कल्पना पढ्न?
खट्टा क्रीम र लसुन सस: नुस्खा सामाग्री
Alkalosis - यो के हो? Alkalosis: कारण, लक्षण र उपचार
Sor - छ ... परिभाषाहरू, पर्यायवाची, प्रयोग उदाहरणहरू
थाइल्याण्ड मा Similan द्वीप को अद्भुत विश्व
नतीजा3को CPMP - यो कहाँ फेला पार्न र दिन?
ब्रोकोली को व्यञ्जन। आहार खाना खाना पकाउने